Izitulo zonyaka omtsha ngezandla zabo, ifoto. Indlela yokwenza iisokisi zonyaka omtsha, umyalelo wesinyathelo ngesinyathelo
I-sock yeNew New Year's sock yeboya - enye yeempawu zeeholide zasebusika. Kwiisokisi zokuhlobisa kuqhelekileyo ukufihla imimangalo encane okanye iipesele kubantwana ekupheleni kweNyaka entsha kunye neKrismesi. Ngoku akudingeki uchithe imali kunye nexesha ekukhangekeni kweempawu ezikhethekileyo ngendlela ye-sock. Zingenziwa ekhaya ukusuka kwizixhobo ezilungelelanisiweyo: izikratshi, iintambo, amakhadibhodi kunye neepukkins ezitshiweyo.
I-sock entsha yonyaka omtsha esuka kwendwangu ngamanyathelo - isinyathelo ngomyalelo wesinyathelo
I-neochek yeNew New Year Bright ye-Newochek ye-cloth - oku akusiyo nje itekisi elenziwe ngesandla. Esi sikhumbuzo esimnandi kunye nokuzihombisa, okungafani nemifanekiso yephepha, kuya kuhlala iminyaka emininzi. Zigcine nje ikhonkco elityhiweyo elinamakhono kunye nezandla zakho, kunye neetayiti zemihlaza ye-Krismesi, de kube kufikelele ukulungiselela uNyaka omtsha ozayo.
Ukuthunga i-sock kwi-fabric is lula nangaphandle kokuba umshini wokuthunga, kunye ne-embroidery yokubhenkcelela, ngokunyanzelela ngamnye uqala isalathisi.
idayini ebomvu okanye uboya - 15 ngo-25 cm
i-pink fabric - 10 by 10 cm
umhlophe omnyama, omnyama, we-orange
umgca omhlophe-10 ngo-10 cm
i-sintepon okanye uboya bekotoni
Yinqumle iziqwenga ezimbini ezibomvu kwesoti ebomvu ngesimo sock, uphindwe kabini. Ukuba kunzima ukuba uyenze "ngamehlo" - qalisa okokuqala umgca we-sock ephepheni. Emva koko usike i-templar kunye nesangqa kwisitya.
Dweba umbala omhlophe weqhwa. Kufanele ibekwe phezulu kwesock, njengoko kuboniswe kwisithombe.
Kwinqaku! Esikhundleni se-snowmans-three-dimensional-snowman, ungayigcoba isicelo sedosa, iSanta Claus, umvundla, insimbi okanye nayiphina isimboli sonyaka ozayo.
I-embroider ene-black thread intambo yobuso beqhwa, kunye nolune-orange kunye neempumlo ngendlela yenqante.
Ngomgcu omhlophe, gcoba iqhwa lekhephu ukuya kwelinye icala le-sock ene "inaliti" phambili. Beka i-sintepon encinane okanye uboya bekoton phantsi komfanekiso omhlophe ukunika umthamo kumlingiswa woNyaka omtsha. Yifaka izandla zakho ngomtya omnyama.
Ukusuka kwipuphu ebomvu, yenza i-lacquer. Bayihlalise emacaleni angayi kukhangela ngesigamu sesibini se-sock.
Sula zombini iinqumlo ze-Sock entsha ye-sock nge-"backle" phambili. Ukuba isalathisi ayigxininisi - umgca ophezulu ungashiywa ungakhange ulandelwe, mhlawumbi udibanise itheyipu okanye uhlambe phezulu, uguqe ngaphakathi.
I-sock entsha yonyaka omtsha eyenziwe ngomgubo ingagcwaliswa ngeesekese okanye isetyenziswe ukuhlobisa indlu yeholide.
I-Garland yamasokisi omnyaka omtsha wekhadibhodi - iminyathelo ngamanyathelo esinyathelo
Iifreflakes ezivela kumaphepha amhlophe kunye nezikhonkwane ezilula zamashishini ziya kuba nakho ukwenza wonke umntu. Kuthekani malunga negorland ngohlobo lweesokisi zonyaka omtsha? Esi sisisombululo esilungileyo apho akufuneki ukuthenga isethi yamaphepha emifanekiso okanye amanqaku. Yenza umgca wekhadi lekhadibhodi, intambo kunye ne-napkins ekhutshwe ngokuqhelekileyo eneprints. Unokuyihobisa indlu okanye iofisi ngeenqwelwana-iisokisi, yenza iinkcukacha ezinkulu okanye ezincinci ngokwengqiqo yakho.
amakhadibhodi - iphepha eli-1
iifinki ezinemibala - 4 ii-pcs.
Sika iqela elincinci lekhadibhodi ngendlela ye-sock. Yenze ezinye iikopi ezi-7. Ubungakanani bunokunyuka ngokuxhomekeka kubude obufunayo bemijelo yomnyaka omtsha.
Ukusuka kwi-napkin nganye, cima 4 kumanani afanayo. Ungayifaka ikhadibhodi ingenanto kwi-napkin kwaye uyinqumle ngaphandle kwendlela.
Sika ii-socks ezi-2 zamathinki ezinemibala zibe ziincinci ezincinci: isithende, intloko ye-sock kunye nomtya ophezulu.
Ukuqulunqwa kweeplatele yonke kuboniswe kumanani amakhadibhodi.
Kuzo zonke izwane zomgodla, gcoba iincinci ezincinci, njengoko kuboniswe kwisithombe. Ngaphantsi komgca ophezulu webhodi nganye yekhadibhodi, gcoba umtya oya kudibanisa igrafi kwisiqephu esinye. I-garland ekulungele iyakhonkxwa kwiwindow, ifenitshala okanye umthi weKrisimesi.
I-sock yeNew New Year on the magnet-isinyathelo nge-step instruction
I-sock yomnyaka omtsha kwi-magnet ayiyona nje into yokuzibhabisa kwifriji. Le nto ingomdla wokuthabatha iipesele kunye neesekese zemihla ngemihla yoNyaka omtsha. Into ephambili - fumana ibhokisi elincinci elungileyo phantsi kweempahla zeekhemikhali zendlu okanye izinto zeofisi.
Ibhokisi elincinane elilinganisa 4 nge 10 cm
Cima iqela lekhadibhodi ukusuka kwikhadibhodi enokuzifihla ibhokisi emva kwayo. Ukusuka kwi-napkins, unqumle izikhalazo ngendlela yemigqomo kunye neengqungquthela zesock.
Gquba i-sock entsha yonyaka ukususela kwikhadibhodi eneziqwenga ezimbala.
Kwibhokisi kwicala elinye, gcoba umxube we-magnet.
Ngecala elincinane lebhokisi, gcoba i-sock yeNew Year's sock.
Namathisela umbane kwifriji uze ugcwalise i-sock yonyaka omtsha kunye neesekese zakho ezithandayo okanye ezinye iipesele ezimnandi.
I-collage yezithombe ngezandla
Imigaqo kawonkewonke yokuziphatha eofisini
Ukutya okunomdla kulo lonke usuku
Yintoni enokugqoka iiplanga?
Isaladi yeapulo kunye neetatayi
I-romance romance: ingakumbi engasongela yona?
Unyango lwentlungu ephantsi emva kwezilwanyana
I-TOP-5 iinqwelo zeenwele zokunyusa zebusika 2016-2017
Usulelo lweNtsholongwane kumntwana osana oluncinane